डिभिजन टूः यस्तो छ नेपाल र क्यानडाबीचको गणित, हारे वा जिते के हुन्छ ? | News Nepal
डिभिजन टूः यस्तो छ नेपाल र क्यानडाबीचको गणित, हारे वा जिते के हुन्छ ?
काठमाडौं, १ फागुन । आइसीसी वल्र्ड डिभिजन टू को अन्तिम खेलमा नेपालले क्यानडासँग भिड्नेछ । नामिबियामा जारी प्रतियोगितामा बुधबार शीर्ष स्थानको क्यानडासँग दोस्रो स्थानको नेपालले खेल्न लागेको हो । यो खेलको विजेता शीर्ष दुईमा रहने पक्का छ। शीर्ष दुईमा पर्ने होडमा चार टिम छन्। सोमबार भएको खेलमा पराजित भएपछि केन्या र ओमान भने एक खेलअघि नै शीर्ष दुईको होडबाट बाहिरिएका छन्।
४ खेल खेल्दा समान ६ अंक जोडेको क्यानडा र नेपाल क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा छ। नेपालको हकमा क्यानडालाई पराजित गर्न सके अर्को महिना जिम्वावेमा हुने क्वालिफायरमा स्थान पक्का हुनेछ। क्यानडाले जित हात पारे पनि त्यहि नै हुन्छ।
बुधबार नेपाल र क्यानडासँगै नामिबिया र युएई बीचको खेल पनि हुनेछ। यी चार टिम शीर्ष दुईको होडमा छन्। यदी नामिबियाले अबको दुबै खेल जित्ने र नेपाल पराजित हुने हो भने नेपाल शीर्ष दुईमा पर्न असफल हुनेछ। नेपाल पराजित हुने र नामिबियाले आज केन्यासँग हारेर भोलि युएईलाई जितेमा पनि नेपाल र नामिबियाको अंक बराबरी हुनेछ र रनरेटको आधारमा शीर्ष दुईमा पर्ने टिमको छिनोफानो हुनेछ।
नामिबियाले दुबै खेल हार्ने र नेपाल पनि भोलि पराजित भए नेपाल र युएईको समान ६ अंक हुनेछ। यस्तो अवस्थामा पनि रनरेट निर्णायक हुनेछ। नेपालले क्यानडालाई पराजित गर्दा सिधै शीर्ष दुईमा स्थान पक्का हुनेछ अन्यथा अन्य टिमको नतिजा र रनरेट निर्णायक हुनेछ। डिभिजन टू को शीर्ष दुई स्थानमा रहने टिम अर्को महिना हुने वान डे वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा छनोट हुनेछ। यस्तै तेस्रो र चौथो हुने टिम डिभिजन टू मै रहनेछ र पाँचौ र छैटौँ हुने टिम डिभिजन थ्री मा झर्नेछ।
प्रकाशित मिति : 2018-02-13
उप्रेतीले ल्याए नयाँ गीत (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । भूपाल उप्रेती गीतकार बनेर नेपाली सांगीतिक आकाशमा उदाएका छन् । सानै उमेरदेखि गीत संगीतमा विशेष चासो राख्ने उप्रेतीलाई आफ्ना...
भक्तपुर मन्दिरमा शङ्कास्पद शव भेटियाे
भक्तपुर, ६ जेठ । भक्तपुर नगरपालिका– ३ स्थित मंगलाछेस्थित शिवालय मन्दिरमा अन्दाजी ६५ वर्षका पुरुषको शव शंकास्पद अवस्थामा भेटिएको...
पोखरा, ६ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कार्यालय समयमा ट्रेड युनियन गतिविधि हुन नहुने बताएका छन्...
विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिफारिस
प्रदेश नं २ का सञ्चारमाध्यमलाई राहतपूर्ण वर्गीकरण गर्न आग्रह
उपचारका लागि मन्त्री यादवलाई थाइल्याण्ड लगिँदै
एपेक्स बैंक घोटाला प्रकरणमाएक एक सय ४८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
धनुषामा विद्यार्थी मृतावस्थामा फेला
नेकपामा पूर्व एमालेबाट ४५ जना केन्द्रीय सदस्य छानिए
‘राष्ट्र बैंक ब्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्यो, अनि सुशासन भत्कियो’, त्रिलोचन पङ्गेनीको बिचार
३३ किलो सुन काण्ड: भंगालो मात्रै कि मूल नै संग्ल्याउने?
व्यापार अपार्टमेण्टको, धन्दा डाक्टरी डिग्रीको
के हाम्रो बिजुली भारतले किन्नै पर्छ?